Afaka mahazo aretina masirasira ve ny lehilahy? Fitsaboana aretina amin'ny masirasira lahy - Fanabeazana Ara-Pahasalamana | Desambra 2021
Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Community, Company Fiaraha-Monina News Orinasa Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Pets Fanabeazana Ara-Pahasalamana Wellness Fiaraha-Monina, Fahasalamana Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Fahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Lalao
Tena >> Fanabeazana Ara-Pahasalamana >> Afaka mahazo aretina masirasira ve ny lehilahy?
Afaka mahazo aretina masirasira ve ny lehilahy?
Na dia marina aza fa ny aretin'ny masirasira (candidiasis) dia mihabetsaka indrindra eo amin'ny vehivavy, ny lehilahy koa dia mety hahazo aretin-tsinapy.
Ny aretin'ny masirasira vehivavy sy lahy dia samy vokatry ny holatra antsoina hoe Candida Albicans, izay faritra voajanahary amin'ny volon-kodintsika, indrindra amin'ny faritra mando sy fonosan'ny moka. Na izany aza, ny fihanaky ny holatra ao am-bava, ny hoditra, na ny lohan'ny filahiana dia mety miteraka aretina misy masirasira.
Satria matetika izy ireo aorian'ny firaisana ara-nofo ary misy fiantraikany amin'ny taovam-pananahana, dia manintona ny aretina masirasira amin'ny masirasira amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana. Saingy tsy miparitaka amin'ny alàlan'ny firaisana ara-nofo ny aretina. Ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy kosa dia mety hampirongatra ny fitomboan'ny holatra candida, mampikatso ny aretina iray. Ireto misy hevi-diso ihany momba ny aretina masirasira amin'ny lehilahy, noho izany dia izao no tokony ho fantatrao hamantarana, hisorohana ary hitsaboana aretina misy lalivay amin'ny lehilahy.
Fambara ny aretina masirasira lahy
Ny ankamaroany dia mety ho taitra noho ny fieritreretan'ny fitomboan'ny holatra amin'ny taovam-pananahana, fa ny vaovao tsara dia misy ny lehilahy sasany tsy miaina soritr'aretina ny masirasira masirasira . Ny sasany kosa, mety manomboka mahatsikaritra soritr'aretina aloha toy ny hoditra mando manodidina ny lohan'ny penile, mena ary mangidihidy. Rehefa mandeha ny aretina dia mety misy ny soritr'aretina:
Fahasosorana mafy na mangidihidy
Ny ratra amin'ny foreskin na ny filahiana
Fotsifotsy misy fotsy ao anaty vongan-tsoroka (mitovy amin'ny fromazy)
Tsy fahazoana aina mandritra ny firaisana
Fihetseham-po mandoro mandritra ny fivalanana
Vongan-koditra fotsy sy mamiratra
Ny aretin-kiran'ny kandida dia mety hitarika amin'ny balanitis, toe-javatra miavaka amin'ny fivontosana koa amin'ny lohan'ny penile sy ny hoditra.
Satria misy koa ny candida ao am-bava, azo atao ny mamorona karazan-tsofina masirasira hafa antsoina hoe thrush am-bava , izay mety ahitana soritr'aretina toy ny:
Ny fery fotsy eo amin'ny lela, ny takolaka anatiny, ny lanilany, ny amandy, na ny siligaoma
Mena, may na maharary
Tsiro ratsy ao am-bava
Fihetseham-po toy ny landihazo ao am-bava
Ny olona iray manana soritr'aretina mahery vaika indrindra na aretina iray izay tsy mamaly ireo fanafody lafo dia lafo dia tokony hitsidika ny mpitsabo anao. Izay mahatsapa ny aretina masirasira voalohany dia hendry ihany koa amin'ny fandaharam-potoana. Matetika ny dokotera dia mahavita mamantatra klinika fa misy masirasira lahy, hoy i Susan Bard, MD, mpitsabo aretin-tsaina any amin'ny birao. Fandidiana dermatolojia Vive sy fitsaboana fanadinana any Brooklyn. Matetika izy io dia azo fantarina amin'ny alàlan'ny soritr'aretina, ny tantara ara-pahasalamana ary ny fizahana sary. Raha ilaina, hoy izy, ny aretina dia azo hamarinina amin'ny alàlan'ny famonoana kolontsaina holatra.
Antony sy antony mahatonga ny aretina ny masirasira lahy
Efa napetrakay fa ny aretina masirasira amin'ny lehilahy sy vehivavy dia vokatry ny masirasira candida amin'ny hoditra. Ny faritra mando sy misavoana no toerana mety hampidi-doza indrindra, hoy ny Dr. Bard. Ilaina tokoa ireo faritra ireo tontolo iainana mahasoa ho an'ny tsy fifandanjan'ny candida . Saingy angamba ny fanontaniana maika kokoa dia ny hoe: inona no mahatonga an'ity tsy fifandanjan'ny holatra ity? Ny tena manafintohina indrindra dia ny firaisana ara-nofo amin'ny mpiara-miasa voadona. Averina indray, tsy areti-mifindra ireo aretin-holatra ireo, ary tsy areti-mifindra azo avy amin'ny firaisana, fa ny fihaonana mivantana amin'ny fitomboan'ny candida dia mety hisy fiantraikany amin'ny sela holatra voajanahary amin'ny hoditra.
Ny vaovao tsara dia somary azo sorohina izy ireo. Na izany aza, ny fihetsika, fanafody, ary ny fepetra sasany dia mety hampiakatra be ny vintana amin'ny fitrangan'ny aretina candida, toy ny:
Fahadiovana sy fahadiovana ratsy
Ny fananana diabeta (siramamy ao amin'ny ra ambony dia midika siramamy bebe kokoa amin'ny urin'olombelona, ​​izay afaka mandrisika ny fitomboan'ny masirasira)
Mampiasa savony na gel mandro izay manelingelina ny hoditra
Tontolo iainana mando sy mando
Fampiasana antibiotika maharitra
Aretina manindry ny hery fiarovan'ny vatana
Ny fanalavirana ireo antony mety hampidi-doza ireo dia mety handray anjara betsaka amin'ny fisorohana aretina amin'ny masirasira.
Fitsaboana aretina amin'ny masirasira lahy
Ny fomba tsotra indrindra hialana na mitsabo aretina masirasira dia amin'ny alàlan'ny fandraisana fepetra fisorohana. Saingy indraindray, na dia mitandrina aza ny lehilahy dia mety mbola hiharan'ny holatra tafahoatra ihany. Soa ihany fa azo tsaboina. Ny ankamaroan'ny tranga dia malemy paika ary hamaly ny fanafody antifungal lafo vidy, fa ny tranga mafy kosa dia mety hitaky fanafody mahery kokoa.
Fitsaboana hopitaly masirasira lahy
Andao atomboka amin'ny fototra. Ilaina ny fahadiovana. Ny fitazonana ny taovam-pananahana ho madio sy ho maina dia hanampy amin'ny fitantanana fitomboan'ny holatra. Ny fampiasana gel vita amin'ny fandroana fofona sy manao atin'akanjo tery dia afaka manelingelina ny hoditra ary mandray anjara amin'ny tontolo mafana sy mando ary paradisa masirasira. Ny fanaovana fimailo mandritra ny firaisana dia hanampy amin'ny fiarovana ny filahiana amin'ny tsy fifandanjan'ny holatra.
Ny aretin'i Candida indraindray dia handeha irery, fa ny tsy firaharahiana azy ireo dia tsy hevitra tsara. Vitsy fanasitranana aretina ao an-trano aretina mety ilaina amin'ny tranga maivana. Ny fakana supiotika probiotika na ny fihinanana sakafo be probiotika toy ny yaourt voajanahary dia afaka manampy amin'ny famerenana ny masirasiran'ny vatana sy ny fifandanjan'ny bakteria. Ny sakafo sy menaka voajanahary miaraka amin'ny fananana antifungal dia mety ho toy ny fitsaboana lohahevitra mahomby, toy ny:
Vinaingitra cider apple (esory foana aloha io!)
Peroxyde hidrogen (ahena koa)
Ny lehilahy izay voan'ny masirasira dia tokony tsy hanao firaisana mandra-pahasitranany koa, satria mety hanelingelina ny faritra voadona izany ary mety hanary ny fifandanjan'ny candida an'ny vadiny.
Ny famoahana am-bava dia mety hamaly ny fanasitranana ao an-trano, fa afangaro amin'ny rano ary ampiasaina ho fanasana vava. Ny ranon-tsiranoka koa mety mahomby.
Ny fanafody antifungaly tsotra OTC dia mahazaka otrik'aretina ny masirasira rehetra sy ny vongan-tsofina am-bava. Ny sasany amin'ny menaka antifungal mahomby indrindra dia misy Lotrimin ( clotrimazole ) ary Monistat ( miconazole ). Ity farany dia matetika amidy manokana ho an'ireo vehivavy voan'ny masirasira amin'ny fivaviana, saingy mitovy amin'ny lehilahy ihany koa. Ny voka-dratsin'ireto fanafody ireto dia ny fahasosorana vonjimaika (izany hoe ny fandoroana na ny mangidihidy) ao amin'ny tranokala fampiharana.
Ny antifungaly lohahevitra dia mandaitra matetika, hoy i Dr. Bard. Ho an'ny areti-mifindra malemy dia azo omena fanafody antifungaly am-bava. Ny mpitsabo iray dia afaka manolotra doka indray mandeha amin'ny fanafody am-bava mahery kokoa, toy ny Diflucan (fluconazole) . Ny aretina masirasira, na dia ireo mafy aza, dia matetika no hanjavona aorian'ny fitsaboana fohy.
Ny fitsaboana am-bava am-bava matetika dia misy fanasana vava antifungaly Diflucan , Mycelex kely, Nystop , na Ketoconazole fa tsy izany.
Amin'ny fikarakarana sy fitsaboana sahaza azy, ny ankamaroan'ny aretina masirasira amin'ny lahy dia tokony hadio ao anatin'ny telo ka hatramin'ny 14 andro. Izay aretina maharitra mihoatra ny tapa-bolana, na dia misy fanafody aza, dia tsy maintsy miverina mankany amin'ny dokotera, satria mety mila fitsaboana hafa izany.
Misy fiantraikany amin'ny zanakao ve ny fihinanana Zoloft sy ny fampinonoana?
Inona no mahatonga ny potasioma ambany?
ny lyrica sy ny cymbalta dia miaraka voadinika
inona no azoko ampiasaina hampihenana ny tosidrako?
inona no fanafody tsara indrindra amin'ny orona mikoriana
izay vitamina d no tsara raisina
hafiriana no azonao atao ny maraina aorian'ny pilina